Cunto kariye leh bakeyle soodhaha leh iyo geed isbari si aad uga takhalusatid dufanka caloosha, bowdyada, gacmaha iyo gadaal - CAYMISKA PLUS MAG
ACCUEIL » QODOBO »Cunto karis ah oo leh bakey soda ah iyo geed isbonji ah si aad uga takhalusatid baruurta caloosha, bowdyada, gacmaha iyo gadaal - SANTE PLUS MAG
Cunto kariye leh bakeyle soodhaha leh iyo geed isbari si aad uga takhalusatid baruurta caloosha, bowdyada, gacmaha iyo gadaal - SANTE PLUS MAG
Welcome / u'y / Cuntada yaryar /
Cunto karis ah oo la dubayo soodhaha iyo khalka si aad uga takhalustid dufanka caloosha, bowdooyinka, gacmaha iyo dhabarka
By: Amber T
Culeyska iyo cayilku wuxuu kordhin karaa halista dhibaatooyin caafimaad oo badan, oo ay ku jiraan sonkorowga, cudurada wadnaha iyo kansarrada qaarkood. Sidoo kale, haddii aad uur leedahay, ogsoonow in miisaankaagu yahay mid aad u culus waxay u horseedi kartaa dhibaatooyin caafimaad oo gaaban iyo mustaqbal wakhti dheer adiga iyo ilmahaaga. Hase yeeshee, sida laga soo xigtay asxaabteena adduunkamid ka mid ah laba qof oo Faransiis ah waa miisaan, cayilku waa dhibaato caafimaad oo weyn ee dadweynaha. Maqaalkani, waxaanu soo bandhigeynaa cunto karis ah oo ku salaysan baking soda iyo khalka cider si ay kaaga caawiso inaad ka takhalusto miisaankaaga dheeraadka ah.
TheNOLOL wuxuu qeexayaa miisaanka iyowaa obeysité sida raasumaal aan caadi ahayn ama xad-dhaaf ah oo dufan ah oo saameyn kara caafimaadkaaga. Sababtoo ah sababaha cayilku waa mid adag, waxaa jira waxyaabo badan oo isdhexgal ah, sida genetics, qaab nololeedka, iyo sida jidhkaaga u isticmaalayo tamarta.
Marka, si aad uga gudubto dhibaatadan, waxa ugu horreeya ee la sameeyo waa isku day inaad maareyso miisaankaaga. Waxaan kugula talineynaa inaad bilowdo adiga oo isticmaalaya a Xisaabiyaha BMI (Tusmada Mass Body) si ay kaaga caawiso go'aaminta haddii laguu tixgeliyo cayil ama haddii kale. Haddii aad tahay, ama haddii aad leedahay hal ama waxyaabo badan oo halis u ah cayilka, waa muhiim inaad la tashato takhtar si aad u xajisan oo taxadar leh.
Cufnaan iyo cayilku waxay leeyihiin waxyeelo halis ah caafimaadka. Si kastaba ha ahaatee, cayilka adduunka oo dhan ayaa ku dhowaad saddex jeer tan iyo 1975 iyo 2016, balaayiin 1,9 oo qaangaar ah oo da'doodu ka wayn tahay da'da 18 ayaa aad u culus. Hase yeeshee cawaaqibka caafimaadku waxay noqon kartaa mid ficil ahaan leh:
Dhiirrigelin : Miisaanka cayilku wuxuu kordhin karaa garaaca wadnaha wuxuuna hoos u dhigi karaa awooda jidhka ee dhiiga ku wareega weelashii.
macaanka : Cayilka ayaa ah sababta ugu weyn ee keenta Diabetes type 2 sababtoo ah waxay keeni kartaa iska caabin insulin, hormoon oo xukuma sonkorta dhiigga.
Cudurada wadnaha : Atherosclerosis, adkeynta halbowlayaasha, waa 10 marar badan oo dadka ku badan buurnaanta. Sidoo kale, cudurada wadnaha ee wadnaha ayaa sidoo kale ku badan dadkaas sababtoo ah dufanka dufanka waxay ku ururaan halbowlayaasha jirka ku quudiya. wadnaha.
Dhibaatooyinka wadajirka ah : Ciriiri iyo cayilku waxay saameyn kartaa jilbaha iyo miskaha sababtoo ah miisaan culus oo lagu soo rogay goysyada.
Hurdada Hurdada: Hurdada jiifka, kaas oo sababa neefsasho gaaban oo gaabis ah, ayaa joojineysa hurdo waxayna keeneysaa in aan loo baahneyn inta lagu jiro maalinta. Dhibaatooyinka neefsiga ee la xidhiidha cayilku wuxuu dhacaa marka miisaanka dheeraadka ah ee derbiga laabta uu ku cadaadiyo sanbabada wuxuuna keenaa neefsashada oo adkaata.
Kansarka: Dumarka, adigoo miisaankoodu sarreeyo waxay kordhisaa khatarta ah in la horumariyo noocyo kala duwan oo kansar ah, oo ay ku jiraan kansarka naasaha. naasaha. Sida ragga, waxay leeyihiin halis badan oo ah in kansarka laga helo colon iyo prostate.
Cunto si ay kaaga caawiso inaad ka takhalusto dufanka xad-dhaafka ah
Xoogaa 1 oo ah khudaar cider tufaax ah
½ qaado shaah kalluun ah
Galaas 1 oo biyo ah
Ku bilaw inaad ka daadiso soodhaha dubista galaas biyo ka dibna ku dar khalka tufaaxa ee tufaaxa oo isku dar dhammaan. Cab cabitaankan subaxdii calool madhan oo loogu talagalay maalmaha 5.
Maxay u shaqeysaa?
Baking soda: Dr. Rachele Podednic, Kaaliyaha Professor ee Nafaqada Simmons College ayaa sharxay asxaabteena Women'shealth markaad cunto ku kariso soodhaha, waxay ka soo baxdaa astaamaha caloosha si ay u sameeyaan cusbo, biyo iyo dioxide kaarboon. Sidaa darteed, iyada oo profile ah alkaline, waxay ka caawisaa yaraynta astaamaha caloosha oo keeni kara acid a badan ee caloosha, taas oo kaa dhigi doonta inaad dareentid fudud oo aan yareyn. Intaa waxaa dheer, baking soda oo kuu fasaxaya in aad jirkaaga ku dhejisid dareemid foorjada. Natiijada, waxaad si weyn u yareeyneysaa tirada cuntada la cunay kuwaas oo kaa caawin doona xaqiiqda lumiso poids.
Khudaar cider ah oo caarad Waxaa ku jira acetic acid in suufka khudradda tufaaxa jilciya guryahooda hurdada. Sidoo kale loo yaqaanno ethanoic acid, waa aaladda dabiiciga ah ee dhadhanka culus iyo ur xooggan. Daraasadaha qaarkood waxay soo jeedinayaan in ay kor u qaadi karto miisaanka oo ay hoos u dhigto heerka sonkorta ee dhiigga, iyadoo hoos u dhigeysa heerarka insulin, hagaajinta dheef- iyo yaraynta kaydinta baruurta.
- Soodhaha macmacaanku waa xajin ehka ilkaha, haddii loo isticmaalo si xad dhaaf ah. Sidoo kale laguma talinayo haweenka uurka leh.
- Qalabka cider-ka ah waa in la googooyaa oo la baabi'iyaa si dhexdhexaad ah, sababtoo ah waxay keeni kartaa xanuunnada dheefshiidka, gaar ahaan dadka qaba boogaha caloosha, sababtoo ah aysidhka.
Excel - Liiska Qaybinta Qalabka (Hufan) - Talooyin
Talooyin: Sida loo hagaajiyo helitaanka "Dis Siri" ee AirPods